Uluhlu lwemibhobho yamandla ombane mveliso kunye nabathengisi
I-HFB yamandla odonga angatshatanga
Ukugquma okungafunekiyo, okukhuselekileyo nokuthembekileyo: Eyona nto iphambili yombhobho ilungiswe nge-polypropylene, eneempawu ezifanelekileyo zokugquma kwaye inokugcina ukuxhathisa okuhle koxinzelelo lwangaphandle kumaqondo obushushu aphezulu. Ifanelekile njengomkhono okhuselayo kwimigca yamandla ombane ophezulu. Uqine kunye noxinzelelo ukumelana, ngqongqo kwaye bhetyebhetye: Kuye uxhathiso eqine ngakumbi, ukumelana uxinzelelo lwangaphandle kunye bhetyebhetye ngcono. Unxibelelwano lutywinwe ngocingo, olulungele ...
I-IFB yamandla odonga kabini
I-IFB yangaphakathi-eludongeni imfutho yamandla yentsimbi, ekwabizwa ngokuba yi-CM edityanisiweyo yokuqinisa amandla eludongeni, inoyilo loyilo lwenoveli, ulwakhiwo olwahlukileyo, ukuxhathisa okuphantsi, ukuguquguquka okuhle, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuqina kwendandatho ephezulu, kwaye akukho lula ukuyaphula kunye ubudala. Udonga lwangaphandle luyisisiseko sesangqa, lusebenzisa ngokupheleleyo umgaqo wesinyithi we-I ukuphucula i-inertia yoxande yecandelo lomnqamlezo, kwaye udonga lwangaphakathi luthambile, oluphucula ukusebenza kwe-threadin ...
Intambo yebhendi yamandla e-MPP engekho eyembiwa
Iimpawu Product 1, Yiba yokusebenza egqwesileyo zombane usambathisa. 2, Yiba nobushushu obugqwesileyo obushushu kunye nokusebenza kobushushu obuphantsi, ukusetyenziswa kobushushu bexesha elide -5 ℃ -95 ℃. 3, amandla aphezulu ashushu anyanzelekileyo esiqwenga somsesane, ukusebenza okuphezulu kokucinezelwa, ukumelana nokubola okukhulu. 4, ubunzima Light, kulula ukuba ufake yi uqhagamshelo eshushu ukunyibilika. 5, ubomi inkonzo Long imibhobho, ubomi inkonzo ekhuselekileyo iminyaka engaphezu kwama-60. Inokuphinda isetyenziswe iphinde isetyenziswe kwakhona, kwaye ayizukungcolisa imeko-bume ...
CPVC intambo yebhatyi yebhatyi
Iipropati zezinto ezibonakalayo Iipayipi zamandla e-CPVC zisebenzisa i-resin ye-PVC-C njengezona zinto ziphambili zokumelana nobushushu kunye neempawu ezifanelekileyo zokugquma. Iimveliso ze-CPVC ngoku zamkelwe njengeemveliso zokhuselo lokusingqongileyo oluhlaza. Iipropathi zabo ezigqwesileyo ezibonakalayo kunye neekhemikhali zifumana ukwanda kwengqwalaselo kolu shishino. Imibhobho yamandla e-CPVC iqinile imibhobho yodonga eqinileyo eneendonga zangaphakathi nezangaphandle ezigudileyo, umbala obomvu-orenji, imibala eqaqambileyo nebambe amehlo. Ubushushu bokumelana nemibhobho yamandla e-CPVC ine-15 ...